Qaamuuska Soomaaliga: Beddelid ama Biirin. | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxaanu wada ognahay in Afka Soomaaliga qoran yahay muddo ka yar nus qarni, sidaa oo oy tahay, haddana afkeennu waxaan ku qabnaa kalsooni in uu yahay mid leh mug iyo dhumuc afeed iyo qeexitaan iyo sharax ka bixin kara kownka aynu ku noolnahay. Muddadii yareyd ee uu qornaa waxaa lagu tallaabsaday guulo waaweyn oo muuqda inkasta oo ay jireen caqabado la kowsaday qoristiisa kuwaa oo sii laba lixaadsaday xilligii qaran jabka.
Soomaalidu waxay lahayd nolol midabbo badan lahaydna xiriiro caalamka kale oo waa dalka leh xeebta ugu dheer Afrika, sidaa darteed; la yaab ma laha hodantinnimada afkeeda, waxaase hodontinnimadaa weeciyay ama caqabad ku noqoday sababaha hoos ku xusan iyo kuwa kale oo badan:
1-Ku biiristii Carabta iyo ololahii Afka Carabiga oo dhinac socday qoristii afka Soomaaliga oo ahaa afka dadka.
2-Aqoonta Soomaalida ee casriga ah oo aad u yarayd taa oo keentay jijiminta afafka iyo afkeenna inaanu samayn kari waynay.
3-Nidaamkii hanti-wadaagga oo afkii ku soo koobay erayo xaddidan oo ka tarjumya oo kaliya halka loo socdo iyo jehada la doonayo in bulshada laga wacyi-geliyo, waxaana halkaa ku baxay erayo baaxad leh oo lagu qeexo nolosha kala duwan.
Seddexdaa waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen horumarintii Af ka Soomaaliga, ha yeeshee tan ugu weyn ee ay adagtahay in laga kabsado waa qaamuuska Soomaaliga oo sii dabar go’aya. Kolka aan leeyahay qaamuuska kama wado qaamuus qoran oo magac iyo qoraa leh, ee waxaan kala jeedaa qaamuus maskaxeedka ummadda ee afka iyo erayada.
Qaamuuska sii dabar go’aaya ee Soomaaliga waxaad ogaanaysaa markaad ku noolaato waddan kale oo aad dib ugu laabato dalka. Waxaad dareemaysaa in afkii kaliya isbeddeline ee ay waxwalba is beddeleen, oo ay ugu horreeyaan nolosha, dareenkii, dabcigii, dabacsanaantii iyo hab-dhaqankii iwm, taas oo si aan laga warhayn u beddesha eray maskaxeedkii.
Waxaa yaraanaya erayada Aadmiga la xiriira, waxaa dibbanaya erayada naxariista iyo dabacsanaanta, waxaa luuq galaya erayada xushmada, kalsoonida iyo caawinta. Waxaad furmaya ama kuu furmaya qaamuus cusub oo ka bilaabmaya oraahyo cadaweysi:
“Car iyo kir”
.“Maxaad iga tari kartaa”
“Adigay kuu taallaa”
“Yaa tahay horta”
“Ka wareeg haddii kale”
“Dalka aniga ayaa leh”
Xaalkana waxa uu sii dhabqayaa marka talada dadkana noqonto Soomaaliya la qabsi ayay kaaga baahan tahay, taa oo ka dhigan: “Beddel qof ahaantaada qaamuuska erayada iyo oraahyada ee aad sidato, isu na qaabee bayada adag ee aad soo gashay.
Waxaa hubaal ah in Soomaaliya uga hartay qayrkeed qaamuuskaas oo ay maalin walba sii kobcinayso kuna sii darayso erayo cusub oo aan horaan loo maqal. Waxaa kale oo marag-ma-doonta ah in loo baahan yahay inaan bilawno qorista qaamuus kaa ka soo horjeeda oo ka bilaabmaya:
Qaamuuska kore ee ay jahannamada ka qiiqayso waxaa iska kaashaday soo saaristiisa nidaamkii ciidanka ee Soomaaliya muddada dheer ka talinayay, xarakaadka diinta ee aaminsan fadqalalaha inuu yahay tubta xukunka lagu gaaro iyo ugu danbayn fawdada oo siisay jawigii iyo mart-gelintii lahaydna qaabaynta iyo isku dubba-ridka qaamuuskan.
Si kale, haddii aan u dhaho qaamuuskan waa mid aan innaga dhan si ama si kale aan uga qaybqaadannay soo saaristiisa iyo naashnaashkiisa, isla annaga ayaana na laga rabaa inaan beddelno oo aan ku beddelno mid aad xoogga u saaraya Aadmiga, halka kan kale xoogga ka saarayo dhulka iyo kheyraadka, mid ku dhaata lama huraannimada wada-noolaashaha, mid leh debacsanaan eray iyo oraah lana heshiis ah deegaanka iyo dunida kale.
Qore: C/raxiim C. Shaafici